Samara. Rest e Samara yonke ukunambitheka!
Samara - akuyona nje edolobheni ibhizinisi, kodwa futhi indawo lapho ungachitha yakho ngamaholidi ephelele. Ukuze abe ukuphumula okuhle, hhayi ngempela ukuya zokungcebeleka okunethezeka angaphandle. A ezihlukahlukene zokuzijabulisa anganikeza wena Samara esaluncela. Makalale Samara yonke ukunambitheka kanye isabelomali inikeza wonke umuntu ezihlukahlukene zendawo ehhotela izakhiwo, zokungcebeleka, sanatoriums , niphumule amakhaya.
Hot ehlobo ngakho ufuna shí emfuleni cool. Samara umema zonke izimenywa ukuvakashela amabhishi eminingi yaleli dolobha. Nansi konke okudingayo: ematendeni, amabhentshi ne awnings, Cabanas, senhliziyo, zezingane kanye nezemidlalo zokudlala. Nifuna iholidi esebenzayo e Samara? Khona-ke engcono, uthenga emfuleni sidlale nemidlalo imidlalo ogwini, ngeke ukuthole.
Ogwini ethandwa kakhulu:
Beach Park angadle ngabuhle obutheni, ubude - 410 m;
Barboshinoy ngoba ukusa (150 m);
Ingxenye yokuqala ezixukwini (1.3 km);
isigaba wesi-2 ukuvakasha (1.2 km);
ebhishi eduze sibhedlela "Mozhajskij" (120 m);
Krasnoglinsky lolwandle endaweni (300 m).
Ukuze izivakashi olindele kunazo usukhokhe lolwandle KIN.UP, okuyinto sise Meyi ekwehleleni. Lapha, i-swimming pool ngamanzi olwandle, isihlabathi ahlanzekile, izihlambi, sun bed nezambulela, omdala kanye zezingane izithombe ibha.
Holiday Homes e Samara
Abantu abaphethwe izinkinga of the system zemisipha, isimiso sokugaya ukudla bungene, isimiso sezinzwa, izifo izifo zabesifazane, noma aphendukele ephelele "Mozhajskij", okuyinto loMfula olunothile iVolga jelly udonga.
Esikhathini olunothile emahlathini kaphayini kukhona sibhedlela emangalisayo "Ethembeni", "laseStavropol" futhi "ihlathi Russian". Basuke etholakala Togliatti (neSamara region). Zhigulevsky eduze kwesigubhu. Lezi zindlu isivakashi anikele anhlobonhlobo amasevisi zokwelapha kanye ukukhalima, 3 ukudla ngosuku futhi amakamelo nazo zonke Izinsiza. It inikeza izivakashi ebhishi ukhululekile nasogwadule olunesihlabathi, ikamelo ukuqina, umtapo, ibha, sauna, pool, itafula imidlalo.
Amaholide ngemindeni nezingane
Samara, yaze yayinhle into! Makalale Samara imibhangqwana zingenziwa ngesisekelo "Rook", okuyinto ku osebeni iVolga. Yena, ikakhulukazi, itholakala esiqhingini Green Grove, okuyinto kubhekwa indawo imvelo. Kumila has Cottages ezimbili kanye ezintathu storey ukhululekile. Ensimini ka "Rook" kuyinto amabhiliyade, ikamelo ukuqina, ibha cafe, ebaleni lokudlala. Ukuze nabancane kukhona zezingane Igumbi ubuciko, ehlobo kusayithi ekamu Animators futhi ukusebenza. Ukudla ngesikhathi ukuzilibazisa isikhungo "Isikebhe" eziyinkimbinkimbi, kathathu ngosuku.
Enye for ngemindeni nezingane - "Daisy" ukuzilibazisa isikhungo. Itholakala ngomfula e Shigonsky District, okuyinto insimu ka "Murano Ihlathi" Reserve. Cabins kusayithi ekamu kukhona ezihlukahlukene: kusukela umnotho ukuze ikilasi okunethezeka. "Daisy" linikeza ukusizakala ezinsizakalweni ezifana yokupaka khulula izimoto, a inkundla yokudlala kanye ezithuthelayo, ikhofi ibha, table tennis, sokuqasha noma isikebhe. Indawo lapha ruble 1200 (kuhlanganise 4 ukudla).
I Murano ihlathi ogwini Gulf elihle Usinsk (190 ukusuka Samara) kukhona omunye ehostela - "Dawn". Zonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni nethuba bahlala ezindlini ahlukene abasemazingeni ahlukahlukene wenduduzo. Kafushane, ezokungcebeleka zezingane e Samara kungaba ezihlukahlukene kakhulu.
Ukunikezwa kubantu abasha
Ngezinye km 120 kusukela Samara, endaweni olunothile kakhulu, Ukuzijabulisa "Umoya ohelezayo". Lokhu ehostela isendaweni Kopylovo nhlonhlo, budebuduze Togliatti. Ngakho-ke kuyabonakala ebukekayo Zhiguli Mountains. Lapho ungaba nesikhathi esihle njengoba inkampani enkulu, futhi ndawonye. Chalet "Umoya ohelezayo" - endaweni ezemidlalo, yokupaka khulula, pool, disco kusihlwa, imishini zemidlalo (ezinamasondo, namabhodi okushibilika, amabhayisekili, njll ...). Segumbi ngelanga - kusuka 750 ruble.
Rest e Samara ehlobo - kungcono ezihlukahlukene olukhulu zonke izinhlobo zokuzijabulisa. Uma ufuna ukuba zifezeke, ukudlala amabhiliyade noma volleyball, isikebhe ngokuqashisa, inala nomdanso disco, bese ukhetha isikhungo ukuzilibazisa "Iskra". Itholakala esiqiwini "Samarskaya Luka" eduze nedolobhana Podgora. izindlu Summer, zidle kathathu, cafe, bar - konke lokhu ngokuqinisekile ukwanelisa ngisho amaholide olindele kunazo. Kukhona kungenzeka ukwenza ezemidlalo nemidlalo, ukubhukuda, ukudansa. Izindleko zokuphila - ruble mayelana 810 ngosuku.
Ngezinye amakhilomitha 130 kusukela Samara has a omangalisayo epaki-hotel "Vasilyevsky". Le ndawo omkhulu ekamu site - 30 ha. On insimu yalo ikhona inkantolo basketball, insimu webhola, izinkantolo tennis. iwayini Vula emiphongolweni kanye zone hookah. Izikhungo ngesikhathi Park Hotel yonke ukunambitheka .. Hamba-inqola ithrekhi, disco, sushi bar, ejimini, swimming pool, zoo mini, uhla sokudubula, njll Ukuze isibalo kuyodingeka bakhokhe ruble 1400.
Awukwazi ngaphandle kwamanzi nokuyicabanga amaholide yakho? Emahostela e Samara, sesivele sifundzile, manje ake uqhubekela isikebhe uhambo. ukubukwa Ezinhle Kakhulu Samara engcono ukujabulela, lesisebentisa ukuhamba phezu teplohodike encane noma liner. Nsuku zonke kusuka marina futhi ukhululekile sihamba ubumnandi izikebhe. ukuhamba Okufushane Barboshinoy ukusula nemizana Shiryaevo futhi Christmas, iziqhingi eziningi futhi peninsulae sicela wonke umuntu, ngaphandle kokukhetha. Noma ungeqa zonke cruise elithakazelisayo eduze iVolga ebabazekayo! Uma ufuna iholidi sangempela, ungakwazi ukuqasha isikebhe VIP-ikilasi. inkonzo enjalo iqala ukujabulela ithandwa enkulu. Nokho, okunye nabangani noma esibambisene nabo ebhizinisini ku yacht elibizayo - injabulo Yiqiniso, akuyona ezishibhile, kodwa kholwa yimi, kuyakufanelekela it.
Ngicabanga - lokhu kuyiso sonke isibopho Samara oluyohlala? Makalale Samara ehlukahlukene kakhulu. Ufuna vakashela ebhayisikobho ezivulekile? utshani Soft, Dome of the sky, ohelezayo efudumele futhi ozithandayo namaqhawe akho movie - yini romantic more? Cinema AeroKino inikeza bendawo nezivakashi ukubukela ibhayisikobho omuhle emoyeni, abangane abasha futhi uthole ophethe vivacity.
Ukuze uthole iholide okuphumuzayo futhi obunokuthula amapaki ephelele eziningi Samara Botanical, Strukovsky, Izwe Gardens. Bencoma izihlahla amahle zezimbali nakanjani ukukusiza uphumule. Kulabo namanje uthanda enomsindo, ungakwazi ukubheka ezindaweni ezithize nge ikhefi ehlobo noma iya ku ugibele.
Samara - liphinde amathuba amaningi sokuzilibazisa asebenzayo. Paintball, Ukushushuluza, "banana", isikebhe, flying nge parachutes, go-karting, ihhashi ogibele, jet ski, isikebhe - ekstremaly ngokuqinisekile ngeke be bored umzuzu lapha. Ethandwa kakhulu futhi uyawuthanda amanzi epaki lendawo "Victoria". Ungavakashela Izitolo emzini: "Spaceport", "Park House", "Moscow", "Mega" nabanye.
Samara - nendawo enkulu kuze kube iholidi ngaphambi kwabo bonke!
Nokho, njengoba uqonde, ejabulisayo yokuzilibazisa yakho ngamaholidi, awukwazi phesheya kuphela, kodwa futhi ezweni lethu, isibonelo esihlaba umxhwele kakhulu lesi - Samara. Makalale Samara - ingxubevange wangempela ukuzijabulisa. Ukhululekile ekamu indawo loMfula i-iVolga emfuleni ohamba, omangalisayo amabhishi, imigoqo kanye ema-disco - konke lokhu ngokuqinisekile ukwanelisa ngisho izivakashi olindele kunazo. Wozani Samara futhi uzibonele!
Alexander saseNevsky Cathedral Novoyarmarochny: Umlando kanye nencazelo
Kasteel de Haar, Netherlands: izithombe, kanjani
Russian Federal Highway. Izithombe emendweni sikahulumeni. I ngesivinini esiphezulu emgwaqeni omkhulu federal
Onguthelawayeka eSiberia: umlando, incazelo, ubude
Imodi eyinhloko Petersburg kaMasipala
I-pasta ene-zucchini no-utamatisi: zokupheka ezilula zokupheka
Kanjani ukubonisa amabala yellow kusuka izingubo ezimhlophe: izeluleko kusuka emizi wazibonela
Amafomu izinhlobo credit
Edayisa ukudla kwamazwe ahlukene - kungcono ... Umlando ukubukeka kanye nencazelo
Kulokho izwi kwaba welithi "Husky"? Sipak siposha hoshozela noma Husky?
Kungani abantu abakwazi ubuhlungu?
Amafu engavamile kakhulu esibhakabhakeni
A amazwi ambalwa mayelana nendlela ukulungiselela yenkomo
Abadlali of the ifilimu "Dauria". Izici imidwebo
Usimende - material efakazelwe amakhulu eminyaka
Imfundo engeziwe ku isimiso esisheshayo